sheeko jacayla | www.saaxil.tk
sheekadan oo uu diyaariyey cabdi samed bashe
sheeko jacyla !!!!!
Wadnayaal Is jeclaaday!!!!Waa sheeko jacayl ah oo dhex martayQalbi Xaaji Aden Iyo Aqli jaamac yare
Waa Qiso dhaba
“Hibo eebe ku siiiyey iyo habeen la iskama qaado,” ee Qalbi, kasokow waxbarashadeeda dugsiga waxay aad ugu wanaagsanayd guud ahaan cayyaraha fud-fudud gaar ahan cayyarta kubada koolayga ee loo yaqaan “Basket Ball.” Qalbi waxay markiiba ka mid noqotay gabdhihi u cayaari jiray kubada kolayga isla dugsiga ina Oomaar ee magaakada Hargaysa.
Maalin maalmaha ka mid ah waxaa Qalbi u yeedhay gudoomiyihi Gudiga olombikada gobolka waqooyi galbeed “Adbillahi Dheere” iyo taba-barihi kooxda xulka gabdhaha kubada kolayga ee gobolka waqooyi Galbeed “Axmad jinac” oo Qalbi ugu bishaareeyey in Ayyada loo doortay kabiteenada hogaamin doonta kooxda xulka gabdhaha kubada kolayga ee gobolka. Waxa kale ooy Qalbi u shegen in dhammaan kooxaha xulka wiilasha iyo gabdhaha kubada kolaygu soo diyaar noqdaan maalinta Jimcaha, 10 ka Subaxnimo, si ay ugu kici timaan magaalo madaxda Muqdisho ooy kaga qayb gali donaan tartanka ciyaaraha koobka horyaalka gobolada ee kubada kolayga.
Qalbi magaalada Muqdisho dad qaraabo ah iyo asaxaabatoona kama-taqaan, sida darteed, waxay go’aansatay inay dhanba u dhaafin gurigi mar-tida lo dajiyey oo Qalbi waxay wakhtigeedi ku soo koobtay: .
Waxaa fadhiya dhanka midigta ee albaabka laga soo galo hoteelka Curuba, gaar ahaan qaybtiisa xaafladaha Afar wiil oo dhallin-yar ah. Waxay aad iyo aad ugu qushuuceen sha’ni wanaagi iyo sharfti ka muuqatay gabadhan albaabka ka soo gashay, oo wiil walba is-dhahay Ar-may taada noqota, waxaase wiilashi iswa-ydiyeen carr yaa gabadhaas la hadli oo nin raga ah?, wiilka ka mid ah wiilashi ayaa soo kacay isagoo sharad ku soo galay inu gabadha la hadli dono oo u isagu ku qaban doono wiilku isaga un ba is- dhahaye, ma oga waxa u kala kulmi iyo wax u mudan midba, wuxa u wiilku ogayn hadal adayga hablaha Soomaaliyeed guud-ahaan, gaar-ahaan habeenka iskugu kiin horaysa in-aan dhayal iyo ciyaar ciyaarba loogu soo gali karin Qalbi se, wayba ka sii xag jirtaa oo waa gabadh aad u dagan, hadal kooban, miisaaman oo xikmad badan leh waa gabadh aan haba-yaraate loola iman karin sheekooyinka raqiiska ah.
Waa laba aan is ogayne isku eeg waxay kala qaadan. Horayba seLo yidhi, “ Fardo la isku hayo maxaa la iskaga faanin.”
“Abaayo waa lagu salaamay.”
“wiilki,”- Abaayo qof miyaad raadinaysay.
“Qalbi,”- Walaal qof baan raadinayeyba kumaan odhan.
“Wiilki,”- Abaayo hablihi martida aha inad tahay wan u jeeda, side-waaye
“Qalbi,”- walaal waxba taas kaama galine, danhaaga sheego.
“Wiilki,”-Abaayo adiga uunbaan ku caawin-rabay NO.
“Qalbi,”- Walaal intaas mooye wax kale miyaad haysa.
Waxaa gadaal kaaga timid Nimco Jeego oo intay ku soo booday labada daan ka dhunkatay waxay tidhi, “Alla waa Qalbi abaayo ii warran sideed tahay.”
“Qalbi,”- Walaal waan iska fiicanahay ee adigu ii warran, sideed tahay.
“Nimco”-Abaayo waan fiicanahay, oo hadaan isdhahayey maxaa ku dhacay gabadhi.
“Qalbi,”-Walaal malaha waan idinku soo daahay ee iga raali ahaada.
“Nimco,”-Maya, abaayo naguma aad soo dahin ee, walaalkay Aqli na maad istaqaanaan oo inteed isku barateen.
cigaal shiidaad sheeko ilaqosol ah